JINGHPAW KASA: မပခ စစ်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးများ အပြင်ဆေးခန်းများသို့ မသွားနိုင်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် မြောက်ပိုင်းတိုင်း (မပခ) ရှိ စစ်ဆေးရုံတွင် အလုပ်လုပ်သော ဆရာဝန်ကြီးများ အပြင်းဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင် ခြင်းမရှိကြောင်း ဒေသခံ ပြည်သူများမှ တဆင့် သိရှိရပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကေအိုင်အို အစိုးရနှင့် ဖြစ်သော တိုက်ပွဲများမှ တပ်ခေါက်လာသော ဗမာစစ်တပ် စစ်သားများ ဒဏ်ရာရရှိမှု များပြာသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မပခ စစ်ဆေးရုံးမှ ဆရာဝန်ကြီးအများပိုင်းသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ဆေးရုံး၊ ဆေးခန်းများတွင် အချိန်ပို ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကာ ၀င်ငွေရှာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယခုအခါ စစ်တပ်ဆေးရုံ၌ ဒဏ်ရာရစစ်သားများ အလွန် များပြားလာသောကြောင့် အပြင်ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများ လာရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ခံများမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
The military physician, who are from the Northern Burmese Military headquarter, can’t go out to work in private clinic in Myitkyina, according to Myitkyina civilian. It is because of the battle with KIA and many Burmese soldiers were injured in front line. Actually, these military physicians are working overtime in clinics to earn more money, but now they can’t go outside because many Burmese soldiers were injured in the battles. Especially, surgeons can’t go outside for the extra job, said one of the civilians.
zh bawn said...
အင်း.. . . . . ဒီတိုင်းတာ ဆိုငါတို့မြစ်ကြီးနား ကတော့ မသန်မစွမ်း စစ်ခွေးဗမာ ( သူတောင်းစားတွေ) အလွန်များလာတော့ မှာပေါ့။ရင်လေးတယ် အဲ့သူတောင်းစားတွေက လူရှိရင်တာ တောင်းစားတာ လစ်ရင် ခီုးမယ် တိုက်မယ်နဲ့ ခြေတွေ လက်တွေ တာပြတ်သွားတာ အဲ့ဒီစိတ်တွေကပြတ်ကိုမပြတ် နိင်တာ။ အကောင်းဆုံးက တော့အဲ့ဒီစစ်ခွေး လက်ကျန်တွေကို လည်ပါဖြတ်ပြစ် အဲ့ဒါမှ အားလုံး ရင်အေးရမှာ